Samsung yeLinux paDeX haina kutora gore | Linux Vakapindwa muropa
Kumhanya Android paPC chinhu chinofarira vashandisi vazhinji, ndosaka kune mapurojekiti senge Android-x86. Kune rimwe divi, kwaive zvakare Linux paDeX kubva kuSamsung, zano kubva kukambani yeSouth Korea iyo yakatibvumidza isu kubatanidza yedu Samsung chishandiso uye ishandise sekombuta yeLinux. Sezvauri kuona, isu tiri kutaura mune yakapfuura nguva, uye ndiko kuti kambani ine hurongwa hwekusiya chirongwa ichi padhuze.
Yakave iriyo kambani yakazivisa danho iri. Samsung yaifunga iyo Microsoft Inoenderera Yakanga iri zano rakanaka uye akafunga kuvhura DeX yake, asi zvakatadza kukwezva kune vanhu vazhinji kunyangwe hazvo, pabepa, ndicho chirevo chakasimba kwazvo. Iyo hofori yekuAsia yatanga kutumira maemail kuLinux pane vashandisi veDeX vachikurudzira kuti ichamira kushanda neyekuvandudza kuApple 10, sisitimu yekushandisa iyo yatovepo kumidziyo yePixel uye ichakurumidza kusvika kune Samsung.
Linux paDeX inomira kushanda kana uchisimudzira ku Android 10
Iko kuvandudzwa kweLinux paDeX kwaive kwese nekuda kwevatengi kufarira uye yako yakakosha mhinduro. Nehurombo, isu tinosheedzera kupera kweedu beta chirongwa uye kuti hatichazopa rutsigiro rwemangwana shanduro dzeanoshandisa masisitimu uye zvishandiso - Samsung.
Zvinotarisirwa kuti munguva pfupi inotevera tichaziva zvakawanda pamusoro pechikonzero chakaita kuti vatore danho iri, ndiko kuti, ndechipi chave chikonzero chaicho chakavamanikidza kusiya chirongwa chakatora chingangoita mwedzi gumi neimwe. Ivo vanga vasina nguva yekuvandudza nekuvandudza software, saka chimwe chezvikonzero chingave chekuti kufarira kwevashandisi vavanotaura nezvazvo kwanga kusiri kwakadaro.
Kana iwe uchifarira kuona kuti inoshanda sei (kusvikira yamira) Linux paDeX, unogona kutarisa vhidhiyo ye xda-vatadzi kuti ndinokusiya iwe unotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Samsung yeLinux paDeX haina kutora gore, chirongwa chakamiswa
SpaceX yakakumbira mvumo yekumisikidza yakawedzera 30,000 maStelllink satellites